तपाइँको WordPress साइटमा भुक्तान सदस्यता थप्ने तरीका | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 6, 2013 सोमवार, जुन 8, 2015 Douglas Karr
म निरन्तर प्राप्त गर्ने प्रश्न मध्ये एक हो कि म WordPress को लागी राम्रो सदस्यता एकीकरणका बारे सचेत छु। इच्छा सुची एक व्यापक प्याकेज हो जुन तपाइँको WordPress साइटलाई पूर्ण रूपले काम गर्ने सदस्यता साइटमा रूपान्तरण गर्दछ। Software०,००० भन्दा बढी WordPress साइटहरू यस सफ्टवेयरमा पहिल्यै चालु छ, त्यसैले यो प्रमाणित, सुरक्षित र समर्थित छ!
इच्छा सुची सदस्यता साइट सुविधाहरू समावेश गर्दछ
असीमित सदस्यता स्तर - सिर्जना गर्नुहोस् चाँदी, गोल्ड, प्लाटिनम, वा कुनै अन्य स्तरहरू तपाईं चाहानुहुन्छ! पहुँचको उच्च स्तरको लागि अधिक चार्ज गर्नुहोस् - सबै समान ब्लग भित्र।
WordPress एकीकृत - चाहे तपाइँ नयाँ साइट बनाउँदै हुनुहुन्छ वा अवस्थित WordPress साइटसँग एकीकृत गर्दै हुनुहुन्छ, विशलिस्ट स्थापना गर्न केवल फाइल अनजिप गर्न, यसलाई अपलोड गर्न, र प्लगइन सक्रिय गर्न आवश्यक छ!
लचिलो सदस्यता विकल्प - नि: शुल्क, परीक्षण, वा सशुल्क सदस्यता स्तर सिर्जना गर्नुहोस् - वा तीनको कुनै संयोजन।
सजिलो सदस्य व्यवस्थापन - तपाईंको सदस्यहरू, उनीहरूको दर्ता स्थिति, सदस्यता स्तर, र अधिक हेर्नुहोस्। सजिलैसँग अपग्रेड गर्नुहोस् सदस्यहरू, तिनीहरूलाई फरक स्तरमा सार्नुहोस्, तिनीहरूको सदस्यता पज गर्नुहोस्, वा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउनुहोस्।
क्रमिक सामग्री डेलिभरी - एक स्तरबाट अर्कोमा आफ्ना सदस्यहरूलाई स्नातक गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, days० दिन पछि तपाई स्वत: सदस्यहरु लाई स्वतन्त्र परीक्षणबाट अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ चाँदी स्तर।
हेरिएको सामग्री नियन्त्रण गर्नुहोस् - विशेष स्तरका सदस्यहरूका लागि विशेष सामग्री सुरक्षित गर्न केवल "लुकाउनुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। "मोड्युलर" सदस्यता सिर्जना गर्नुहोस् र अन्य स्तरहरूबाट सामग्री लुकाउनुहोस्।
शपिंग कार्ट एकीकरण - निर्बाध रूपमा क्लिकब्यांक, र अधिक सहित, सबैभन्दा लोकप्रिय शपिंग कार्ट प्रणालीसँग एकीकृत गर्दछ।
बहु-स्तर पहुँच - तपाईंको सदस्यहरूमा तपाईंको सदस्यता भित्र बहु ​​स्तरहरूमा पहुँच दिनुहोस्। उदाहरण को लागी, केन्द्रीय डाउनलोड स्थान बनाउँनुहोस् सबै तहका सदस्यहरु लाई अनुमति दिएर।
हाम्रो सम्बद्ध लिंक र प्रयोग गर्नुहोस्
आज तपाईंको निःशुल्क परीक्षण सुरू गर्नुहोस्!
टैग: ईच्छाWordPressWordPress सदस्यताWordPress सदस्यता प्लगइन